जिल्ला सहकारीको चुनावमा ओली पक्षको लज्जास्पद हार ! — donnews.com
जिल्ला सहकारीको चुनावमा ओली पक्षको लज्जास्पद हार !
'राष्ट्रिय प्रतिनिधिमा आचार्यले दुईसय १४ मत प्राप्त गर्दा सांसद कोइरालाले जम्मा ८६ मत प्राप्त गरेकी थिईन्'
पोखरा । जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड कास्कीको चुनावमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ओली समूह)का उमेद्वारहरुले लजास्पद हार व्यहोर्नु परेको छ । गण्डकी प्रदेशमा ओली पक्षको वर्चश्व रहेको दावी गर्ने यस समूहलाई शुरुवात मैं सहकारीमा लज्जास्पद हार व्यहोर्नु परेपछि नराम्रो झड्का लागेको छ ।
नेकपा ओली पक्षीय नेता तथा प्रदेश सांसद प्रभा कोइरालासहितको टिमले कास्कीमा नराम्रो हार व्यहोर्नु परेको हो । ओली पक्षीय सांसद कोइरालालाई नेपाली काँग्रेस र नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह)का उमेद्वार दीपक प्रकाश आचार्यले अत्याधिक मतका साथ हराएका हुन् । राष्ट्रिय प्रतिनिधिको उमेद्वारमा आचार्यले दुईसय १४ मत प्राप्त गर्दा सांसद कोइरालाले जम्मा ८६ मत प्राप्त गरेकी थिईन् ।
ओली पक्षधरले राष्ट्रिय प्रतिनिधिमा मात्र नभई जिल्ला कार्यसमितिमा समेत लज्जास्पद हारको सामना गर्नु परेको छ । जिल्ला सहकारी संघ कास्कीमा ओली पक्षलाई निमिट्यान्न पार्दै अध्यक्षमा सावित्रा कोइराला विजयी भएकी छिन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह)बाट उमेद्वार बनेकी सावित्राले एकसय ९८ मत प्राप्त गरेर विजय भएकी हुन् । उनका प्रतिस्पर्धी बलराम गौतमले जम्मा ७८ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यस्तै अर्का अध्यक्षका उमेद्वार धर्मराज अर्यालले जम्मा ३६ मत प्राप्त गरेका थिए ।
अन्य सम्पूर्ण पदमा पनि संयुक्त प्यानलका उम्मेदवारहरु मात्र विजयी भएकी भएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा संयुक्त प्यानलका छविलाल लामेछानेले दुईसय २२ मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा ओली पक्षीय उमराज बास्तोलाले जम्मा ८१ मत प्राप्त गरेका थिए ।
महिला उपाध्यक्षमा अम्बिका गौतमले १९४ मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा संगीता तिमिल्सिनाले जम्मा ११२ मत प्राप्त गरेकी छन् । महासचिवमा दीपकराज बास्तोलाले २२७ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । प्रतिस्पर्धी ठाकुर पोखरेलले जम्मा ७९ मत प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी, कोषाध्यक्षमा नवराज बरालले दुईसय मत प्राप्त गरेर विजयी हुँदा लक्ष्मण कोइरालाको जम्मा एकसय तीन मत प्राप्त गरेका थिए ।
विषयगत संघको तर्फबाट आनन्द सुवेदी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । महिला सदस्यमा कौशिला गुरुङ (२०६), चन्द्रकुमारी पराजुली, (२१७), मैनादेवी रावत (१९१), बिना लोहनी (२४८) विजयी भएका छन् । खुल्ला सदस्यमा खेमबहादुर गुरुङ (१८६), धनराज पुरी (१६०), लेखा सुपरीवेक्षण समितिको संयोजकमा धर्मबहादुर गुरुङ (१८७), लेखा समिति सदस्यमा रमण पौडेल (२०२), बिमला कुमारी थापा बस्नेत (१८०) मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् ।